Emva kweNtengiso Service - Dongguan Yuechuang yokuZenzekelayo Co., Ltd
-Bulumko Ishishini YueChuang: Isithunzi kunye nentsebenziswano nesebenzayo, yobungcali nethembekileyo, kwaye win-win , ukuba ukunika abathengi kunye yobungcali kakuhle emva-intengiso inkonzo, senza izithembiso zilandelayo kasabatha abathengi bethu;
1. Zonke oomatshini kunye nezixhobo wathengisa inkampani yethu, ukususela kumhla ukwamkelwa yokwamkela, izixhobo ezamahala iwaranti wonke unyaka omnye (ngaphandle umonakalo owenziwe ngumntu), ukususela kwingxelo izixhobo ukwamkelwa isayinwe, zonke iintlobo umonakalo obangelwe ukusetyenziswa yesiqhelo yi Party B inoxanduva ulondolozo simahla kunye Ukutshintshwa, enxibe iindawo ngokungqinelana nesivumelwano phakathi kwamaqela, nokunikela ngenkxaso yezobugcisa yobungcali ubomi.
2. VietNin ​​iza kubonelela ngoqeqesho abashishini izixhobo lwabathengi kunye namagcisa zobunjineli ukusebenza kunye nokusebenza eqhelekileyo ngaphandle de imfuno kungenziwa eziqhutshwa ngokuzimeleyo kwaye imibuzo.
3. Emva kokuvula hotline intengiso iiyure ezingama-24 ngosuku, siya kusabela kakuhle kwaye Ukunika iingcebiso zobungcali emva kokufumana call yokulungisa. Ukuba ufuna ukuya kwisiza yesondlo, fika kwisiza ngokungqinelana ixesha.
4. Emva kokuba isiqinisekiso liphelelwa, inkampani yethu iya kunika inkonzo ulondolozo nenkxaso yobugcisa ngokungqinelana simo, uze ubaqononondise kakuhle izinto, izincedisi kunye neenkonzo zabasebenzi.
5. Ukubonelela ngenkxaso yobugcisa inkonzo ubomi.
Nika abathengi ngenkxaso egqibeleleyo yobugcisa kunye nasemva-iintengiso inkonzo ukunceda abathengi ukukhulula abasebenzi kunye nabasebenzi, neenkqubo zokuvelisa lula, ukuphucula ukusebenza, lagxila umgangatho imveliso, ukwandisa mveliso ngendlela imveliso, ukunciphisa iimfuno zobugcisa abasebenzi ezinxulumene, ukuphucula ubuchule esizisebenzelayo, nokuvelisa iimveliso ezikhuselekileyo yaye athembeke. izihlanganisi Automotive, Toyota i-auto-assembler for izihlanganisi izithuthi abo bathembela.